Erling Haaland oo xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona… - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Erling Haaland oo xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona…
May 3, 2021 at 09:35 Erling Haaland oo xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona…2021-05-03T09:35:19+02:00 CAYAARAHA
(Dortmund) 03 Maajo 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga xagaagan, waxaana uu xiiso ka helayaa qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub.
Hase ahaatee, Dortmund ayaa si buuxda ugu kalsoon inay sii heysan doonto laacibkeeda sidoo kalena uu baaqi ku ahaan doono Bundesliga xilli ciyaareed kale oo dheeraad ah.
Agaasimaha ciyaaraha ee naadiga reer Jarmal, Sebastian Kehl ayaa xaqiijiyay in uu Haaland aqbalay inuu hal xilli ciyaareed oo dheeraad ah ku sugnaado Dortmund, waxaana maamulka naadigaas ay iska indho tirayaan dhammaan dalabaadka u imaanaya 20-jirka weerarka ka ciyaara.
“Waxaan fahansanahay inuu Erling Haaland u ciyaari doono Borussia Dortmund xilli ciyaareedka cusub” ayuu Kehl u sheegay barnaamijka Doppelpass ee ka baxa Sport1.
“Erling guud ahaan waxa uu aqbalay inuu nala sii joogo, maalin kasto ayaan is aragnaa, waxaana uu si buuxdo ugu caddeeyay kooxda go’aankiisa” ayuu hadalkiisa ku adkeeyay agaasimaha ciyaara ee naadiga BVB.
Si kastaba ha ahaatee, laacibka reer Norway ayaa bartilmaameed u ah kooxda Barcelona, halka sidoo kale laacibkan lala xiriirinayo Real Madrid, Chelsea, Manchester City iyo Manchester United.
« Goolkii laadka xorta ahaa, rigooradii uu lumiyay iyo inuu dhaliyo labo gool ciyaartii xalay oo sameeyay rikoorro kala duwan… (Ka bogo)
Itoobiya oo Masar iyo Suudaan Ku Eedeysay in ay Abuurayaan Isbahaysi iyada Ka Dhan ah »